Tacliinta Caan ka ah iyo Waxqabadka Tooska ah - Gargaarka Musiibada ee Gargaarka
Bogga ugu weyn/Waxbarashada caanka ah iyo ficil toos ah
Waxbarashada caanka ah iyo ficil toos ah2022-05-26T19:39:44-04:00
Buugga Tababarka Qorshaynta Waxqabadka
Ficilka tooska ah ee aan xasilooneyn badanaa looma fahmo oo sida badanaa la dhaleeceeyo. Waxaad maqleysaa iyadoo loogu yeerayo waxtar la'aan, Mareykan-la'aan, ama sharci-darro. In wax ku oolnimada waxqabadka tooska ah wali laga doodi karo kalsoonida.
Istaraatiijiyadda Waxqabadka: A Sidee loo hagaa
Waxqabadyadu waxay awood u siin karaan jiil, waxay kicin karaan arrin masraxa caalamiga ah, waxayna qasbi karaan isbeddel siyaasadeed. Hase yeeshe, ficilada sidoo kale si liidata ayaa loo fulin karaa ama waxyeelo ugu geysan karaa kooxdaada iyo yoolalkaaga. Qoraal-gacmeedkaani wuxuu halkan u joogaa inuu kaa caawiyo inaad qaabeyso tallaabo istiraatiiji ah.
Waa maxay koox isku xidhan? Kooxda isku xirnaanta waa koox yar oo dad ah oo isu yimaada si ay ugu diyaar garoobaan waxna u qabtaan. Kooxda waxaa loo abaabulay qaab aan kala-sooc lahayn iyo ismaamul, waxay u adeegsadaan is afgarad si ay u gaaraan go'aano waxayna diiradda saaraan waxqabadka tooska ah.
Kooxaha Iskuxirka: Saaxiibbada, Is-afgarad Degdeg ah, Afayeenno
Kooxda isku xirnaanta waa koox yar oo dad ah oo isu yimaada si ay ugu diyaar garoobaan oo ay u qaadaan tallaabo toos ah. Kooxaha isku xirnaanta waxaa loo abaabulaa qaab aan kala-sooc lahayn iyo ismaamul, ma jiraan wax hoggaamiyeyaal ah qof walbana wuxuu leeyahay cod iyo masuuliyad siman.
Qalabka Soo Kordha ee Qurxoon
Marka loo eego xukun gacan bir ah, adeegsiga tababarku wuxuu ahaa mid istiraatiijiyad ka horreeyay tallaabo.
Buug-gacmeedka iska-caabbinta Cimilada
Waxaan ku abaabulay ficilkeygii ugu horeeyay magaaladeyda xasilloon. Koox naga mid ah ayaa socod ku soo maray magaalada hoose. Waxaan qaadnay heeso. Waan ku heesnay. Waxaan nimid xarunta dowladda hoose. Kama aanan fikirin sida ay u egtahay iska horkeenka duqa magaalada. Markaa waan is tusnay oo waxaan siinnay farriimo deg deg ah. Guul ayaan ku soo laabannay gurigeenii, annagoo gaarsiinnay fariinteenna.
Xarunta Loogu Talagalay Falalka Xadgudubka Ah iyo Xeeladaha
Manhajka Muhiimka ah: Tilmaamaha halganka wax ku oolka ah ee aan xasilooneyn
Kaa hor intaadan aqoon aad u tiro badan oo ku saabsan qorshaynta, dhaqanka, iyo qiimaynta isku dhaca istaraatiijiga ah ee aan xagjirka ahayn. Tilmaamahan manhajku wuxuu wehel u noqon doonaa u-hawlgalayaasha cusub ee khibradda leh, iyo sidoo kale kuwa kale ee doonaya inay wax ka bartaan maadadan.
Isbedelka Cimilada Waxbarshada Caanka ah: Tababbarka Tababarayaasha
Isbedelka Cimilada ayaa durbaba dhacaya oo saameyn ku leh nolosha meeraha oo dhan. Waxaan u baahanahay inaan sameeyno intii karaankeena ah si aan u joojino inay kasii xumaato, laakiin sidoo kale waxaan ubaahan nahay inaan u diyaar garowno bulsho ahaan sidii aan ula tacaali laheyn saameynta waxa imanaya maaddaama isbeddeladu sii xumaanayaan; ma awoodno inaan ku tiirsanaano dowladaha markii kheyraadku yaraado.
Difaaca Bulshada: Hagaha Bilowga & Buug-hawleedka Isdhexgalka
6 tillaabo oo kugu kicin doona inaad qiimeyso baahida, dhagaystayaasha, tababarka, kicinta, awooda, iyo agabka macnaha guud ee bulshadaada.
Waxqabadyo hal abuur leh
Qalabka Waxqabadka Hal-abuurka leh: Hagaha Waxqabadka ee Joojinta Rabshadaha Shakhsi ahaaneed
Qalabkani waxa uu kor u qaadaa hab loogu yeedho faragelinta bulshada ku salaysan ee rabshada ama waxa dadka qaar ugu yeedhaan la xisaabtanka bulshada ama cadaalada wax ka bedelka si ay u jebiyaan go'doominta iyo in xal loogu helo rabshadaha kuwa ay sida aadka ah u saamayso rabshada - badbaadayaasha iyo dhibanayaasha rabshadaha, asxaabta, qoyska iyo bulshada. Waxay na waydiinaysaa inaan eegno kuwa nagu xeeran si aan isugu nimaadno si aan u abuurno jawaabo bulsho oo sal leh, fikir leh.
Dunida Kowaad! Tilmaamaha Waxqabadka tooska ah
Maaddaama xoogagga hungurigu hungurigu riixayo macaamilka iyo jumlada
burburinta Dunida illaa heer aan la maqal, dad ku kala baahsan meeraha
ayaa dib u dagaalamaya. Waqtigu runtii wuu socdaa, maxaa kaloo la qaban karaa
laakiin dhiso xirmooyinka saaxiibtinimo, duuli calanka caabiga, iyo tuurista
qulqulka ugu dhow ee lagu shiidiyo qalabka wax lagu iibsado ee hanti-goosadnimada?
Enganados iyo el Invernadero
En los doce años que transcurrieron desde de la segunda edición de Engañados en el invernadero en formato de revista independiente de edición popular, las prácticas y las políticas para abordar el cambio climático se han expandido y han profundinertes faldineres deleción.
Kaliya Kumeel-guurka ayaa ah qaab loogu gudbo caddaalad dhaqaaleed dabiici ahaan waaraya, sinnaan leh oo ku habboon dhammaan xubnaheeda. Ka dib qarniyo badan oo la dhacay adduunka, faa'iidada-u-horseedka, koritaanka-ku-tiirsan, dhaqaalaha warshadaha ayaa si weyn u wiiqaysa nidaamyada taageerada nolosha meeraha.
Mashruuca Sharciga ee Sylvia Rivera
Laga soo bilaabo Guntii Sare: Istaraatijiyadaha iyo Waxqabadyada Xubinnimada Organi Ururo Ku-saleysan
2007, xubnihii Sylvia Rivera Law Project (SRLP) waxay sameeyeen guddi baaraya sida loogu daro cabir cusub qaab dhismeedka xubinnimada SRLP. Waxaan ujeedkeedu ahaa inaan si ula kac ah u abuurnno baro badan oo ay ku galaan xubnaha bulshada ee khibradahooda joogtada ah ee rabshadaha gobolka, saboolnimada, kartida, cunsuriyadda, iyo transphobia ay u keentay caqabado iyaga si joogto ah uga qaybgalaya ururada bulshada.
Siinta Inta ugu Fiican, Diyaarna u ah Kuwa Ugu Xun: Gargaarka Wadajirka ah, Wadajirka, iyo Dhisida Awooda Cagaf
Quusitaan qoto dheer oo ku saabsan iscaawinta, wadajirka, iyo dhisida awoodda aasaaska.
Buug loogu talagalay waxqabadka tooska ah
Waxqabadka tooska ah waxaa loola jeedaa inaad ku dhaqaaqdo adoo wax kala soocaya naftaada,
intii aad cid kale weydiisan lahayd inuu adiga kuu saxo. Ma jirto dariiq ka wanaagsan oo loo maro
dib ula noqo noloshaada ama inaad isbadal ku sameyso aduunka oo dhan.
Dagaalyahannada Dagaal ee Caalamiga ah
Buug-gacmeedka loogu talagalay Ololayaasha Aan-Caadi ahayn
Dagaallada Dagaalyahannada Caalamiga (WRI) waxay soo saareen Buug-gacmeedkan, oo ku sawiran
waayaha kooxaha dalal badan iyo jiilal kala duwan
Hoodwinted gudaha ithe Hothouse
Hoodwinked gudaha Hothouse: Iska ilaali xalalka beenta ah ee isbedelka cimilada
Waxaa qoray dad asal ah, qabanqaabiyeyaasha ruug-caddaa ah, istiraatijiyadaha dhaqdhaqaaqa iyo hoggaamiyeyaasha fikirka ee ka kala socda cimilodeena iyo dhaqdhaqaaqyada caddaaladda deegaanka, daabacaadda saddexaad ee Hoodwinked ee Hothouse waa mid si fudud loo akhriyi karo, kooban- haddana dhammaystiran ee ballanqaadyada shirkadaha beenta ah Waxaan sii wadnaa in aan ku afgaranno saraakiisha la soo doortay iyo dadweynaha, taas oo noo horseedaysa waddooyin khatar ah oo diyaar u ah in aan balaayiin doollar dadweyne ah ku khasaarinno qorshayaal badan oo saliidda masaska ah iyo hababka suuqa ku salaysan.
Hay'adda Albert Einstein
Ku Saabsan Khilaafka Xadgudubka Istiraatiijiyadeed: Ka Fekerida Aasaasiga
Qarnigii labaatanaad wuxuu ahaa qarnigii ugu rabshadaha badnaa taariikhda la diiwaan geliyo.
Buugga Planificacion Para Organizaciones Sociales
Cada día, en los barrios de nuestro país, miles de organizaciones sociales trabajan incansablemente para mejorar la calidad de vida en sus comunidades, para compartir un plato de comida o una copa de leche, para generar nuevas oportunidades para los pibes y paras, o o los lugares que el Estado deja vacante o exigirle su actuación en la resolución de los problemas sociales.
Xarunta Dhibbanayaasha Jirdilka
Khariidada Dhulka: Spectrum of Allies
Qalabka "Spectrum of Allies" waxaa loo adeegsadaa fahamka dardaaranka Sun Tzu ee ku saabsan "Ogow Dhulka" iyo "Ogow Cidda kaa Soo Hor Jeeda." “Spectrum of Allies” waxay bixisaa fursad xasaasi ah oo lagu qeexo daneeyayaasha arin, iyo, iyadoo loo adeegsaday “Khariidadda Taatikada,” waxay si fiican ugu hagtaa ururada xulashada wax ku oolka ah ee bartilmaameedyada iyo xeeladaha.
Método de trabajo y organización caan ah
La fuerza de cualquier organización está en la Constcción colectiva, la cual se relaciona con múltiples factores, a partir de una realidad determinada, concreta. Waxaa lagu wadaa in maalinta berri ah la soo gabagabeeyo shir looga hadlayo arrimaha bulshada.
Tilmaamaha Fududeynta Aqoon Isweydaarsiga Gargaarka Gargaarka ee Musiibada
Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid waxaa loo aasaasay si loo xoojiyo loona taageero awoodaha bulshada si ay ula kulmaan baahidooda inta lagu jiro iyo masiibooyinka ka dib
iyada oo loo marayo anshax diy oo ku qotoma midnimo. Si loo helo garaaca bulshada
hamiga iyo caqabadaha, si loo dhiso xiriiro qoto dheer oo lala yeesho
shabakad mar walba sii kordheysa, iyo in lala wadaago fikradaha iyo casharrada laga bartay waxyaabihii hore ee soo noqnoqda ee mashaariicda gargaarka bani'aadamnimada ee aasaasiga ah, waxaan ku howlannay safar tababar 30 magaalo Gu'gii 2018.
Mashruuca Sharciga ee Silvia Rivera & Xarunta Qaranka ee Sinnaanta Jinsiga
Ka Qaybgalka Tilmaamaha Tooska ah: Haga loogu talagalay Dadka Gudbiya Jinsiga
Ficillada tooska ah, mudaaharaadyada, iyo ficillada caasinimada shacabka waa aalado awood u leh isbedelka. Kaqeybqaadashada falalkan waxay sidoo kale kugu ridi kartaa halis booliis iyo xabsi si aad ula dhaqanto. Markay kaqaybqaadanayaan ficillada tooska ah, dadka jinsi-galmoodku waa inay fahmaan xuquuqdooda oo ay qaadaan taxaddarrada lagama maarmaanka ah kahor intaanay aqbalin halista xarig.
Golaha Dhaqdhaqaaqa Dadweynaha: Abaabulka Buug-gacmeedka
Habka PMA maahan hanti ay leeyihiin hal urur, qof, ama koox. Dhaqdhaqaaqyada Bulsho ee taariikhda iyo adduunka oo dhan waxay adeegsadeen shirar ay go'aan ku gaaraan. Dhaqdhaqaaqyada, gaar ahaan Global South - Afrika, Aasiya, iyo Latin Amerika - waxay adeegsadeen shirar ay ku hormarinayaan ku dhaqanka dadka awood, is go'aaminta, iyo maamulka.
Xarunta Ficillada iyo Xeeladaha Xadgudubka Aan La Adeegsan
Iyaga keligood taliyayaashu ma qaadi karaan canshuuraha, ma fulin karaan sharciyada iyo qawaaniinta cabudhinta leh, ma sii wadi karaan tareenadu inay ku shaqeeyaan waqtiga loogu talagalay, diyaariyo miisaaniyadaha qaranka, taraafikada tooska ah, maareynta dekedaha, daabacida lacagta, hagaajinta wadooyinka, tababarada booliska iyo ciidamada, ma soo saari karaan shaambadaha boostada ama xitaa caano lo ' .
Waxaa jira waqtiyo aad diyaarin doonto ficil hal mar ah, laga yaabee inaad ku darsato olole qof kale, ama dhacdo kaligeed kaligeed ah.
Awoodda Hoosta: Iska caabin Istiraatiiji ah
Dulmarka guud ee dhismaha hoosta iyo abuurista iska caabin istiraatiiji ah.
Ujeeddooyinka: Ka caawi dadka u ololeeya inay tixgeliyaan duruufaha bulsho iyo siyaasadeed ee ay ka dhex dejinayaan istiraatiijiyadda
Faafinta, Pollinate, Tababar: Qalabyada Manhajka ee Kumeel Gaarka ah
Propagate, Pollinate, Practice: Qalabyada Manhajka loogu tala galay Xilliga Kala guurka oo kaliya ayaa ahaa
ugu horreyntii la soo uruuriyay si loo caawiyo dadka kaqeybgalay Dhaqdhaqaaqa
Dib u gurasho Istaraatijiyadeed oo Jiil Cadaalad & Ecology.
Khariidaynta Awoodda iyo Falanqaynta
Ujeedada khariidaynta awooda iyo geeddi-socodka falanqaynta - Si loo caawiyo kooxda ololaha: - Tixgeli dhammaan cayaartoyda xiriirka u leh ololaheeda iyo aqoonsiga ciyaartoy muhiim ah oo bartilmaameed u ah inta lagu jiro ololaha.
Gargaarka Musiibada ee Wadajirka ah iyo Wadajirka Beehive
Ilaaliyeyaasha iyo kuwa macaash doonka ah
Farshaxanka oo sheegaya sheekada gumeysiga, hanti-wadaaga musiibada, iyo iskaashiga labada dhinac ee iska caabinta.
Kacaankii Puerto Rico ee Gargaarka Musiibada DIY
Puerto Rico ee isbeddelka diy ee gargaarka musiibooyinka, iskaashiga labada dhinac, ismaamulka, iyo aayo-ka-tashiga.
Iskuulka Midnimada iyo Xoreynta
Iskuulka Midnimada iyo Manhajka Xoreynta
SOUL aqoon isweydaarsiyo iyo qalab tababbar ayaa loogu talagalay inay noqdaan kuwo la heli karo oo laga wada qayb geli karo, laguna waafajin karo duruufaha waxbarasho ee dhaqdhaqaaqa. Buugaagta manhajka caadiga ah ee SOUL ayaa la heli karaa si loo dalbado immika oo mugyo cusub ayaa ku jira shaqooyinka!
Buugga Tilmaame-barayaasha ee loogu talagalay dadka u dhaqdhaqaaqa
Si fudud haddii loo dhigo, indho-indhayntu waa habka lagu helo macluumaadka loo baahan yahay ficil lagu guuleysto. Waa aruurinta macluumaadka gaarka ah ee goobta u sahlaya isku-duwaha waxqabadka inuu qiimeeyo ficil toos ah oo dhici kara.
Isgarabsi ma aha Sadaqo!
Hordhac aad u gaaban oo ku saabsan farqiga u dhexeeya midnimada iyo sadaqada.
Ujeeddo ama ujeedo: In la fahmo cidda xulafada nala ah iyo kuwa naga soo horjeedaba. Si loo barto tabahaasi waxay u baahan yihiin in la qorsheeyo oo la xidhiidha
intee in le’eg ayey sameeyaan ama aysan soo jiidan xulafada muhiimka ah oo ay dadka dhaqaajiyaan
dhanka xulafada firfircoon.
Xaaladda dhabta ah: Maxaa u baahan isbadal bulshada dhexdeeda ah?